Nsogbu ndi ogugu n’uwa di egwu. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nsogbu ndi ogugu n’uwa di egwu.
M. Scabies | | ọtụtụ
N’ime afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ mmadụ agwala m na ọ bụ akwụkwọ a ka ọ bụ akwụkwọ ahụ dara ụda n'ihi na Onweghi ihe na-eme maka peeji iri abụọ mbụ. Nke ahụ, ya mere, ha akwụsịwo ịgụ ya. Ihe na-ewute m oge ụfọdụ dịka nke a bụ na, n'ihi enweghị ndidi, ndị a enwetaghị akụkọ dị ịtụnanya. N’ịtụgharị uche na ya, achọpụtara m taa anyị emebiwo. Nsogbu ndi n’agu akwukwo na a audiovisual ụwa bụ na anyị nwere ọtụtụ mpụga, nke na-eweta mmetụta uche ozugbo, anyị chọrọ ịnwe ugbu a, ugbu a, ozugbo. Anyị na-achọ akụkọ ga-erute isi, n'ezoghị ọnụ.
Agaghị m abụ onye ihu abụọ nke na m ga-asị na okwu edere na-aka mma mgbe niile, ebe ọ bụ na m na-enwekwa ọtụtụ usoro na ihe nkiri. Otú ọ dị, ụdị nkà a emewo ka ọtụtụ ndị chefuo ụzọ isi nwee obi ụtọ na ya akụkọ na-ewe oge, nke na-eto eto na nlekọta na ịhụnanya. N'ebe ndị nke nwatakiri m, ọ nwere ike bụrụ eziokwu na ha amaghị ihe ọ bụla.
Mgbe a na-eme mkpọtụ pere mpe
M riri mmepeanya, o mere ka m daa ọrịa.
Aldous Huxley, "Obi Newwa Ọhụrụ."
A mụrụ m na mmalite ninties, na ụwa na ọtụtụ ndị analog, ọ dịkarịa ala na anụ ụlọ. Enweghị m ịntanetị, enweghị ekwentị mkpanaaka, yabụ mgbe m dina n'ihe ndina na akwụkwọ enweghị ihe ọ bụla ma ọ nweghị onye nwere ike ịdọpụ uche m. Taa, n'etiti 2018, mmadu enweghi ike imeghe akwukwo n’enweghi ozi ano WhatsApp na ọkwa isii nke Twitter. Ọbụna mgbe m na-ede edemede a, enweghị m ihe ọzọ ma ọ bụghị ịlele ekwentị m ọtụtụ oge.
Achọghị m imebi teknụzụ, dị anya na ya. Allowsntanetị na-enye anyị ohere ịkpọtụrụ ndị mmadụ site na ọtụtụ puku kilomita, wee chọpụta ụdị ọrụ aka ndị anyị na-agaraghị ama. Ma ọ bụkwa a isi iyi nke ihe ndọpụ uche nke na-egbochi anyị ịbanye n'ime nyocha na ịgbachi nkịtị nke ogologo akwụkwọ chọrọ. Na nke ahụ bụ ihe ndị nke ọgbọ m ghọtara, ndị a mụrụ na oge ọdịnala, na karịa karịa ndị nke ọgbọ ndị gara aga.
Amaghị m ma gị, onye na-agụ m, ị dị iri na abụọ ka ọ bụ iri asaa. Ma n'ọnọdụ abụọ m na-gwa Abigel ihe ndị a: ọzoo l'ị tọru ọkpa iya n'ihi na na peeji nke mbụ ọ nweghị ihe gbawara, ma ọ bụ epic duel ruo ọnwụ, gaa n'ihu na-agụ. Cheta na otutu akuko di oke nma na-ewe oge iji mee ka ndi mmadu mara ha na iwu nke uwa ha. Nke ahụ bụ njem bara uru n'onwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Nsogbu ndi ogugu n’uwa di egwu.
Akwa isiokwu. Echere m na anyị nwere ihe jikọrọ karịa anya. Ekwenyesiri m ike na taa ihe niile dị nso, enwere oke nghọta nke na-eme ka ọ sikwuoro anyị ike ịnụ ụtọ ihe na-ewe oge ya. N'ikwu eziokwu, echere m na ọ bụ ihe ihere, n'ihi na akụkọ niile m gụrụ (ma ọ bụ hụ, ka anyị ghara ichefu na enwekwara ihe nkiri ma ọ bụ usoro na-aga ngwa ngwa) na-aga ngwa ngwa. A na m ahụ ya dịka ezigbo omume. Mgbe ụfọdụ, ngwa ngwa na ngwa ngwa apụtaghị na ọ ka mma, n'ihi na ị ga-emesị ghara inwe ọmịiko na akụkọ ahụ, na ndị odide ma ọ bụ na omume ahụ n'onwe ya, ọbụlagodi na ọkwa akụkọ.
Daalụ maka ịkwụsị na ịza ajụjụ ebe a, Nishi, ekwenyere m na ihe niile ikwuru.
Zaghachi MRR Escabias
Echetara m mgbe m bụ nwatakịrị mgbe m hiri ụra ụra n’elekere asaa nke ehihie, na-agụ akwụkwọ site n’ìhè nke obere oriọna n’elu tebụl dị n’akụkụ àkwà ahụ. M na-atụ uche ụbọchị ndị ahụ, ọ dị m ka ha bara ọgaranya nke ukwuu n'ọzụzụ nke ọgụgụ isi. Ugbu a ọ dị m ka arụpụtara m. Ọbụna ide okwu a siiri m ike, enweghịzikwa m otu ụdị olu ahụ m nwere mgbe m gụrụ akwụkwọ.
Aghọtara m gị nke ọma, Jorge.